पाेखरा- जेठो सन्तान जस्तो बोद्धिक अरु हुँदैनन् ! के तपाईं घरको जेठो सन्तान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईं लागि खुसीको खबर छ । केही समय अघि मात्र गरिएको अध्ययन अनुसार, कुनैपनि परिवारको जेठो सन्तान हुनुका फाइदा धेरै छन् ।
जर्मनस्थित लिपजिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार, परिवारको सबैभन्दा जेठो सन्तान अन्य भन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक हुन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, पहिलो बच्चा पछि जन्मिने हरेक सन्तान पहिलोको तुलनामा कम बौद्धिक र फूर्तिलो हुन्छन् ।
अर्थात् वैज्ञानिकहरुका अनुसार पहिलो भन्दा दोस्रो अलिक कमसल, दोस्रो भन्दा तेस्रो झन् कमसल, चौथौ अझै कमजोर हुने गर्छन् । तर सबैको हकमा भने यो कुरा लागु नहुने बैज्ञानिकहरुको निश्कर्ष छ ।
अभिभावकहरुबाट पाउने गुण पछिल्ला सन्तानमा कम हुँदै जाने भएकाले पनि पछिका सन्तान हरेक दृष्टिले कमजोर हुने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले सयौं बालबालिका माझ यो अध्ययन गरेका थिए । सो अध्ययन प्रोसिडिङ अफ दी नेसनल एकेडेमी अफ साइन्समा प्रकाशित गरिएको छ ।
जाडो बढ्यो : कसरी रहने फिट एन्ड फाइन ?
मौसम धुम्मिएको छ । कठ्याग्रिने चिसो छ । छिटपुट पानी परेको छ । कहीँ हिमपात पनि सुरु भइसकेको छ ।
अब जाडो यामले छोपिसकेको छ । चिसो बढेसँगै केही स्वास्थ्य समस्या पनि देखापर्छ । साथसाथै कतिपय अवस्थामा दैनिक जीवन कष्टकर पनि बन्छ । यद्यपि यो मौसममा केही सावधानी अपनाउने हो भने आफुलाई फिट एन्ड फाइन राख्न सकिन्छ । आफ्नो दिनचर्यालाई अरु बेला झै चुस्त र सन्तुलित राख्न सकिन्छ ।
तातो खाना- जाडोमा खाइने खानाले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ । जाडोमा तातो र हल्का भोजन गर्नु प्रतिरक्षा बढाउने राम्रो तरिका हो । किनकी यसले ब्याक्टेरियाबाट लड्न मद्दत गर्छ । मौसम परिवर्तनको समयमा हल्का र तातो भोजनले प्रतिरक्षा प्रणाीलाई एक तह माथि लैजान्छ ।
पर्याप्त निद्रा- आयुर्वेदमा पर्याप्त निद्रालाई सबैभन्दा राम्रो मानिएको छ । जाडो मौसममा कुनै व्यक्तिका लागि पर्याप्त निद्रा आवश्यक हुन्छ ताकि प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि हुन सकोस ।
खानामा मसला- खानामा केहि मसला मिश्रण गर्नु पनि जाडोमा लाभदायक हुन्छ । यसले शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनमा सहयोग गर्छ । जीरा, बेसार, धनिया, अदुवा र मरिच जस्ता मसला आफ्नो दैनिक आहारामा समावेश गर्न सकिन्छ । यसले रुँघा तथा फ्लुको समस्या रोक्छ ।
नुहाउने काइदा- जाडोजाडोमा पनि नुहाउन त पर्छ नै । तर, नुहाउने विधीमा सुधार गरौं । जस्तो कि, नुहाउनको लागि मनतातो पानीको व्यवस्था गरौ । त्यसमा केहि मात्रामा नुन, तुलसीको पात राखौं । यस किसिमको मिश्रण भएको पानीले नुहाउँदा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
तातो तेलले मालिस- नुहाइसकेपछि शरीरको मालिस गरौं । आयुर्वेदमा प्रतिदिन आत्म-मालिसलाई प्रतिरक्षा बढाउने सबैभन्दा राम्रो विधि मानिन्छ । सूर्यमुखी वा तिलको तेल उपयोग गर्दा मांसपेशी बलियो हुन्छ । मसाजले रक्तसंचार पनि बढाउँछ । जाडोको लागि एकदमै उपयोगी कुरा हो ।
चिसो पेयबाट बच्नुस- डाक्टरका अनुसार चिसो खाना र चिसो पेय पदार्थले पाचन रसको प्रभावलाई कम गर्छ । यसबाट विषाक्त पदार्थको निर्माणमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले यस मौसमका दौरान प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि चिसो खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको सेवन बन्द गरौं ।